Hotel Dusit oo maanta dib loo furay, 6 bilood kaddib weerarkii Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Hotel Dusit oo maanta dib loo furay, 6 bilood kaddib weerarkii Al-Shabaab
Hotel Dusit oo maanta dib loo furay, 6 bilood kaddib weerarkii Al-Shabaab
Nairobi (Halqaran.com) – Arbacadii maanta waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya dib looga furay Hotel Dusit oo muddo lix bilood ku dhow xirnaa, kaddib markii ay weerareen ururka Al-Shabaab.
Xaflad lagu daah-furayo hotelka ayaa lagu casuumay masuuliyiin iyo marti sharaf kala duwan, kuwaa oo qaarkood ay ka socdeen wasaaradda dalxiiska ee Kenya.
“Lixda dhismo ee hotellada Dusitd2 ku leeyihiin dalalka Masar, Taylaaniga, Shiinaha, Buutaan iyo Dubay ayaa laga suray calanka Hotelka Dusitd2 ee Nairobi si taageero loogu muujiyo hotelka mudadii uu xirnaa iyo in lagu xasuusto lix kamid ah shaqaalihii hotelka oo ku dhintay weerarkii 15-kii Janaayo ee sanadkan” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka hotelka.
Wasiirka dalxiiska dowladda Kenya Najiib Balaala ayaa ka qeyb galay munaasabadda dib loogu furay hotelka Dusit.
Lix bilood ka hor, waxaa hotelka lagu qaaday weerar ay sheegteen ururka Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ku dhintay 21 qof oo ay ku jiraan lix qof oo hotelka ka shaqeyneysay.
Dadkii weerarkaa ku geeriyooday waxaaa kaloo ku jiray dad Soomaali ah oo halkaa u tagay in ay ku nastaan.
oo dib loo furay
weerarkii Al Shabaab